‘क्लिनफिड’ तत्काल लागू गर्ने गरी विज्ञापन विधेयक पारित – मुलधार न्युज
Home > समाचार > ‘क्लिनफिड’ तत्काल लागू गर्ने गरी विज्ञापन विधेयक पारित
‘क्लिनफिड’ तत्काल लागू गर्ने गरी विज्ञापन विधेयक पारित
४ भाद्र २०७६, बुधबार १६:३६
काठमाडौं– संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले तत्कालै क्लिनफिड लागू गर्ने व्यवस्थासहित आज (बुधबार) विज्ञापन विधेयक पारित गरेको छ ।
अब यो विधेयक आएसँगै विदेशी च्यानलहरुले आफ्ना कार्यक्रम नेपालमा विज्ञापनरहित रुपमा प्रशारण गर्नुपर्नेछ । यसअघि राष्ट्रियसभाबाट विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक पारित हुँदा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिति तोकेपछि मात्र क्लिनफिड लागू हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले त्यसलाई संशोधन गर्दै क्लिनफिड तत्कालै लागू हुने व्यवस्था राखेर बुधबार उक्त विधेयक पारित गरेको हो । तर, ऐन लागू हुँदा प्रशारण सम्झौता भइसकेका च्यानललाई भने एक वर्ष समय उपलब्ध गराइएको छ । ऐन प्रारम्भ हुँदा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्ग गरी प्रशारण गर्न सम्झौता गरेका संस्थाले एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रशारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसपछि अब विदेशी च्यानलले नेपालमा बिज्ञापनरहित सामाग्री प्रशारण गर्नुपर्नेछ । विज्ञापन गर्नैपर्ने भए नेपालमार्फत विज्ञापन दिनुपर्नेछ । यो ब्यवस्था लागू नगर्न सरकारलाई ठूलो दवाव आएको थियो । विदेशी दवावका बावजुद यो विधेयक पारित भएको छ । यसले नेपालमा अर्बौ विज्ञापनको रकम भित्रिने तथा नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
एभीसी सेन्ट्रल जाेन पुरुष भलिबल प्रतियाेगिताबाट नेपाल बाहिरियाे
‘पृतनापति समन्वयात्मक वैठक २०७५’ समापन
काश्मिरमा प्रहरीमाथि किन बढ्दैछ आक्रमण ?
मोदीको विरोध गर्ने सीपी गजुरेलसहित माओवादीका ५४ जना नेता–कार्यकर्ता गिरफ्तार !
खेलकुद एसीसी यू–१९ क्रिकेटः चीनलाई १० विकेटले पराजित गर्दै नेपालको शानदार जीत
धनगढीमा आह्वान गरिएको आम हडताल फिर्ता
निर्मला हत्या प्रकरण : गृह मन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एसपी बिष्ट मुख्य दोषी
गौचन हत्याका नाइके समिरमानलाई पुनः मुस्ताङ लैजाने तयारी
ओलीको गृहजिल्लामा सुरक्षा चुनौती बढ्यो, प्रहरी प्रमुख भन्छन् –साधन स्रोतको कमी छ
३ सय किलो गाजासहित एक जना पक्राउ
राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार प्याकुरेलबाट राजीनामा
माअाेबादि केन्द्र र एमालेले गरे भक्तपुरमा संयुक्त कार्यक्रम